Khuphela iMetatrader 4 Mobile App, MT4 Mobile Forex Trading
I-MetaTrader 4 Imfono
Ikhaya / amaqonga / yepeni / MT4 kwi-Android
I-MT4 ye-Mobile platform yindlela yokuthengisa isango lakho kwiimarike zemali, nangona xa uhamba, kukunika uluhlu olugqithiseleyo kuzo zonke iimpawu zokurhweba ozonandiphayo usebenzisa kwi-platform ye-MetaTrader 4 yedeskithophu.
Uluhlu olubanzi lwezixhobo zokutshatyalaliswa ngoku luxhasa inkxaso yakho yokuthengisa - i-30 yezibonakaliso zakho zobugcisa ozithandayo, amaxesha ahlukeneyo kunye nexesha langempela lexabiso lemarike. Ngoku kulula ukwenza amandla kwisicwangciso sakho sokuthengisa nge-iPhone yakho / iPad / iPod Touch okanye i-Android.
Ukufikelela kwi-akhawunti yakho ye-FXCC yokurhweba kwiimpawu ezilula ze-3 - khuphela, faka kwaye ungene kwi-platform yokuthengisa yesitorethi usebenzisa iinkcukacha zakho ze-akhawunti ye-FXCC.
Kwi-MT4 yeselula unga:
Xhuma kwi-akhawunti yakho yokurhweba ukusuka naphi na;
Ukulawula ukungena kweemarike kunye nokuphuma kwamaphuzu ngokubeka, ukuguqula okanye ukuvala amashishini;
Faka izikhombisi zezobugcisa ze-30;
Utyalo usebenzisa i-platform-state-art-platform.
ngokuba khonaIvenkile yosetyenziso